Histodil (ဟစ်စတိုဒလ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Histodil (ဟစ်စတိုဒလ်)
Histodil (ဟစ်စတိုဒလ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Histodil (ဟစ်စတိုဒလ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Histodil (ဟစ်စတိုဒလ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Histodil သည် အစာအိမ်၊ အူသိမ်လမ်းကြောင်းရှိအနာများကို ကုသရန်နှင့် အစာအိမ်ချဉ်ဖောက်ခြင်းဝေဒနာကို သက်သာစေသော ဆေးဖြစ်ပါသည်။
ထိုဆေးကို အက်ဆစ်ဓါတ်များခြင်းကြောင့် အစာရေမြုပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်း နှင့် အစာအိမ် အက်ဆစ်ဓါတ်များစေသော ရောဂါစု (Zollinger-Ellison syndrome) အတွက်လည်း အသုံးပြုပါသည်။
Histodil (ဟစ်စတိုဒလ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Histodil ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းသောက်ပါ။
သို့မဟုတ် ဆေးဘူးပေါ်တွင် ညွှန်ကြားထားသည့် အတိုင်းသောက်သင့်ပါသည်။
အစာရှိရှိ မရှိရှိ သောက်နိုင်ပါသည်။
အက်ဆစ်ဓါတ်ကို လျော့နည်းစေသော အစာအိမ်ဆေးများနှင့် အနည်းဆုံး ၁ နာရီခြားသောက်ပါ။
ပိုးသတ်ဆေး၊ မှိုသတ်ဆေးများ (cephalosporin (e.g., cephalexin), itraconazole, or ketoconazole)စသည့်ဆေးများကို သောက်နေရပါက Histodil မသောက်မီ ၂ နာရီအလိုတွင် သောက်ပါ။
Histodil (ဟစ်စတိုဒလ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Histodil ကို ၃၀ ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးရပ်စ်အောက် မှာသိမ်းပါ။ တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Histodil ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Histodil ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Histodil ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Histodil ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
Histodil (ဟစ်စတိုဒလ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Histodil ထဲတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိလျှင်
cisapride, dofetilide, nitrosoureas (e.g., carmustine)
ထို့ပြင် သင်သိထားသင့်သော အရေးကြီးသည့်အချက်အချို့လည်း ရှိပါသေးသည်။
Histodil သည်မူးဝေစေသည့်အတွက် အရက်နှင့် အခြားသောဆေးများနှင့် တွဲသောက်လျှင် မူးဝေခြင်းကို ပိုဆိုးစေပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဆေးသောက်နေစဉ် ကားမောင်းခြင်း၊ အလုပ်ခွင်တွင် စက်များကို မောင်းနှင်ခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိသော အလုပ်များခြင်းကို သတိနှင့် လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။
ထိုဆေးသောက်နေစဉ်တွင် လူနာ အနေဖြင့်လည်း စိတ်ဖိစီးမှုများ လျော့နည်းအောင်နေခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အစားအသောက် အနေအထိုင်များကို ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ကို လိုက်လုပ်ရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။
ဆေးသောက်ပြီး ရက်အနည်းငယ်အတွင် ရောဂါဝေဒနာများ မသက်သာခြင်း၊ ပိုဆိုးလာခြင်းများဖြစ်လျှင် ဆရာဝန်ထံသွားပြပါ။
သင့်ရောဂါကို သင့်ကိုယ်သင် ဆေးမြီးတိုများဖြင့် ကုသခြင်းမျိုးရှောင်ကျဉ်ပါ။
ဝမ်းမဲမဲသွားခြင်း၊ ကတ္တရာစေးရောင်ဝမ်းသွားခြင်း၊ ကော်ဖီအနှစ်ရောင်အန်ခြင်းများဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်ထံသွားပြပါ။
သင်သည် Zaleplon ဆေးသောက်နေသူဖြစ်ပါလျှင် သင့်အခြေအနေကို ဂရုတစိုက် စောင့်ကြည့်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အသက် ၁၆ နှစ်အောက် ကလေးများတွင် Histodil ၏ စိတ်ချရမှုရှိမရှိ တိကျစွာ မရှိသေးသည့်အတွက် သတိနှင့် အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Histodil (ဟစ်စတိုဒလ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Histodil (ဟစ်စတိုဒလ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဆေးတိုင်းသည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ခံစားရနိုင်သော်လည်းလူတဦးနှင့်တဦးအပေါ်မူတည်ပြီး မတူညီပါ။ အောက်ပါတို့သည် ဖြစ်လေ့ရှိသော မပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပါသည်။ ယင်းတို့ မခံမရပ်နိုင်အောင်ဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်ထံသွားပြပါ။
အောက်ပါ ပြင်းထန်သောဆိုးကျိုးများကို ခံစားရလျှင် နီးစပ်ရာဆေးခန်းသို့ ချက်ချင်းသွားပြရပါမည်။
ဆေးထိုးထားသောနေရာတွင် နီရဲခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ ရောင်လာခြင်း
နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ နှေးခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်ဆေးတွေက Histodil (ဟစ်စတိုဒလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Histodil ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အောက်ပါဆေးများသည် Hsitodil ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ပိုဆိုးစေကာ အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက်သည်အထိဖြစ်တတ်ခြင်းကြောင့် Histodil နှင့်တွဲမသောက်သင့်သောဆေးများဖြစ်ပါသည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Histodil (ဟစ်စတိုဒလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Histodil က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Histodil (ဟစ်စတိုဒလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Histodil ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို (အထူးသဖြင့် သင့်မှာ ကျောက်ကပ်နှင့် အသည်းရောဂါများ ရှိလျှင်)သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Histodil (ဟစ်စတိုဒလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ 800 mg တစ်ညတကြိမ်
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ 400 mg တနေ့ ၂ကြိမ်
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ 300 mg တနေ့ ၃ကြိမ် ဖြစ်ပါသည်။
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ 400 mg တနေ့ ၂ကြိမ်ဖြစ်ပါသည်။
ရင်ပူခြင်း (ဆေးဆိုင်များတွင် ဝယ်ယူနိုင်သော ပမာဏ)
ဝေဒနာကို သက်သာစေရန် သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ 200 mg တနေ့ ၂ကြိမ်ဖြစ်ပါသည်။
ဝေဒနာများ ပြန်မဖြစ်စေရန် သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏ200 mg ကို အစာ၊ အချိုရည်များ မစားမီ မိနစ် ၃၀ အလိုတွင် ရေအေးဖြင့် သောက်ပါ။
အစာအိမ်မှ အစာခြေရည်များ လွန်ကဲစွာ ထုတ်နေသော ရောဂါများ
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ 300 mg အစာနှင့် သို့မဟုတ် ညဘက်တွင် သောက်ရပါမည်။
ဆီးအဆိပ်30ml/min.ထက်နည်းသောသူများတွင် သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ 300 mg အကြောထိုးဆေး တနေ့ ၂ကြိမ်ဖြစ်ပါသည်။
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ 25 mg/hour အကြောထိုးဆေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကလေးတွေအတွက် Histodil (ဟစ်စတိုဒလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက် ၁၆နှစ်အောက်ကလေးများတွင် ဆေး၏ကောင်းကျိုးသည် ဆိုကျိုးများထက် ပိုအားသာမှ သုံးသင့်ပါသည်။
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ တနေ့ လျှင်20-40 mg/kg/day အကြောထိုးဆေး ကို ၆နာရီခြားစီခွဲထိုးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂၈ ရက်အောက် မွေးကင်းစ ကလေးများတွင်
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ တနေ့ လျှင် 5-20 mg/kg/day အကြောထိုးဆေး ကို ၈-၁၂ နာရီခြားစီခွဲထိုးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ တနေ့ လျှင် 10-20 mg/kg/day အကြောထိုးဆေး ကို ၆-၁၂ နာရီခြားစီခွဲထိုးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Histodil (ဟစ်စတိုဒလ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Histodil ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Histodil ထိုဆေး၂ မီလီဆေးဗူး (100mg/ml)
Pipecuronium bromideကို ထိုးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးထိုးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်ထိုးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲထိုးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Cimetidine. https://www.drugs.com/cdi/cimetidine.htmlAccessed December 9, 2016
Cimetidine (Rx). http://reference.medscape.com/drug/tagamet-cimetidine-341984. Accessed December 9, 2016
Histodil. http://www.druginfosys.com/brand.aspx?code=2563&packing=4249. Accessed December 9, 2016.